Translate Myanmar (Burmese) to Macedonian | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Macedonian, Myanmar (Burmese) to Macedonian translations, Myanmar (Burmese) to Macedonian Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Здраво како си
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Има ли некој?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Те сакам навистина толку многу
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Колку чини овој хамбургер?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Можете ли да ме викате такси?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး жал ми е
တဆိတ်လောက် Извини ме
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Заинтересиран сум
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Мојот лет беше одложен
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Тука сум за бизнис
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Здраво Моето име е
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Жал ми е, но јас сум оженет
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Би сакал да те прашам
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Можете ли да ме однесете на аеродромот?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Кое е времето сега, молам?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Каде е најблиската полициска станица?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Можам ли да го позајмам телефонот полнач молам?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Можете ли да ми помогнете?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Нареди ми пие, молам?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Колку чини?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Јас сум алергичен на глутен
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Повикајте лекар
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Има ли лекар?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Може ли да се јавам?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Кажи ми го твојот шеф, молам.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Ова место е многу убаво
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Ве однесе во хотелот
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Кој е бројот на мојата соба?